मार्केटरहरू, तपाईंको पोर्टफोलियोमा मोबाइल विज्ञापन छ?
किन तपाईं मोबाइल चलाउनुहुन्न?
आइतबार, अगस्त 9, 2009 आइतवार, अप्रिल २,, २०१। एडम सानो
होईन, मेरो मतलब यो होइन कि शहरका वरिपरि मानिसहरूले बिलबोर्डहरू गाडिरहेका छन्। मेरो मतलब मोबाइल फोन मार्फत उपभोक्ताहरू र ग्राहकहरू सम्म पुग्नु हो। यो सामान्य रूपमा उल्लेख गरिएको छ मोबाइल मार्केटिङ तर मैले यो देखेको धेरै संख्यामा देखेको छु मोबाइल विज्ञापन पछि यसको विभिन्न प्रकारका संख्याहरू छन् मोबाइल मार्केटिङ; एसएमएस/ पाठ सन्देश मार्केटिंग, मोबाइल अनुकूलित वेब पृष्ठहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरू तीन सबैभन्दा प्रमुख छन्।
जबकि मोबाइल मार्केटिंग को प्रत्येक फार्म को यसको आफ्नै फायदे र बेफाइदाहरु छन् र ती सबैले एक उच्च मोचन दरहरु भएको दाबी गर्छन्, मोबाइल मार्केटिंग को बारे मा एक कुरा खण्डन गर्न सकिदैन कि यो प्रयोग हो बढ्दै। प्रायः मार्केटिंग रणनीतिहरूको मुख्य आधार बन्नको लागि यो ० 90 ० र ००० को शुरुमा ईमेल मार्केटिंग जस्तै स्थितिमा देखिन्छ।
पहिले नै हामी धेरै प्रमुख ब्रान्डहरू र साना व्यवसायहरू देखीरहेका छौं जसले केही प्रकारको वफादारी कार्यक्रम समावेश गर्दछ पाठ सन्देश। प्रमुख संगीत लेबलहरू मार्फत संगीत बेच्दै छन् मोबाइल अनुकूलित वेब पृष्ठहरु। सफ्टवेयर कम्पनीहरूले प्रोग्रामहरू केवल मोबाइल उपकरणका लागि डिजाइन गरीएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रियात्मक मतदानको लागि प्रीमियम सन्देश शुल्कको माध्यमबाट राजस्व उत्पन्न गर्न एसएमएस प्रयोग गर्दैछ। राजनीतिज्ञहरूले मोबाइल अलर्टहरू मार्फत समर्थकहरूलाई पल्टाइरहेछन्।
मोबाइल बजारका अन्य विज्ञापन र मार्केटिंग माध्यमहरूमा दुई अविश्वसनीय फाइदाहरू छन्:
व्यक्तिहरू उनीहरूको मोबाइल फोनहरू उनीहरूसँगै बोक्दछन् - त्यसैले समयसापेक्ष हुनु र सन्देश प्राप्तकर्तालाई प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु निश्चित कुरा हो! (यो पनि जिम्मेवारीको साथ आउँछ, अवश्य।)
मोबाइल मार्केटिंगमा ग्राहक अप्ट-इन भएकोले तपाईंलाईaप्रदान गर्दछ प्रत्यक्ष जडान तिनीहरूको मोबाइल फोन नम्बरको साथ।
यस माध्यम प्रयोगको एक उत्तम उदाहरण एक संग छ घर जग्गा मोबाइल रणनीति। हामी रियल ईस्टेट एजेन्टहरू प्लाकर्डहरू प्रदान गर्दछौं तिनीहरूको सम्पत्तीमा राख्नका लागि सम्भावित खरीददारहरूले सम्पत्तीको बारेमा अतिरिक्त विवरणहरूको लागि भर्चुअल भ्रमणको लागि नम्बर सन्देश पठाउँछन्। एकै साथ खरीदारले छनौट गरेर विवरणहरू प्राप्त गर्दछ, रियल इस्टेट एजेन्टलाई पनि अनुरोध र सम्भावित खरीददारको मोबाइल फोन नम्बर बारे सूचित गरिएको छ! हामी एजेन्टबाट व्यक्तिगत रेकर्ड भ्वाइस कलको साथ केही खाताहरू पनि बढाउछौं।
यसले खरिदकर्तालाई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै जानकारी प्रदान गर्दछ - साथै साथै सम्पत्ति एजेन्टलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम प्रदान गर्दछ र क्रेतालाई संलग्न गराउनुहोस्। यार्ड साइनमा फोटोकपीहरू राख्नुमा त्यो सment्लग्नताको स्तर हुँदैन!
त्यसोभए प्रश्न यो हो कि तपाइँ मोबाइल मार्केटि and र मोबाइल च्यानलहरूको फाइदा लिन के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंको कम्पनीले कुन मोबाइल मार्केटिंग पहल सुरू गर्दैछ? यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ बजार एजेन्सी, तपाईंको पोर्टफोलियोमा मोबाइल मार्केटिंग छ? यो हुनु पर्छ!
टैग: मोबाइल विज्ञापनमोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगमोबाइल मार्केटिङमोबाइल मार्केटिंग रणनीतिहरू
मँ पछाडि तपाईंको पछाडि छु ...
अगस्ट,, २०१ 10 2009:२१ अपराह्न
मलाई थाहा छ तपाईं विगतमा चाचाको आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ, तर म तपाईंलाई मन पराउँछु कि हामी मोबाइल विज्ञापनको साथ केहि आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्दैछौं। म तपाईंलाई एक वेबिनारमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु जुन हामी हाम्रो विज्ञापन बिक्रीको VP, ग्रेग स्टर्लिling, र 4INFO का सीईओको साथ होस्ट गर्दैछौं - वास्तवमा, वेबिनारको फोकस ग्राहकलाई ईन्जाग गर्नेमा छ।
आशा छ तपाईं उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ!
अगस्ट 11, 2009 मा 1: 23 AM
महान विचारहरु। मलाई लाग्छ कि मोबाइल धेरै व्यक्तिलाई डरलाग्दो देखिन्छ, तर वास्तवमा यो त्यस्तो खराब होइन यदि तपाईंले सही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने।
रियल इस्टेट ए with्गलको साथ तपाईले गर्नु भएको चाखलाग्दो सामानहरू। तपाईंले डेरन हर्मनको भर्खरको पोष्ट जाँच गर्नुपर्नेछ (http://bit.ly/10t0cO) स्थानीय मा।
ठूलो काम जारी राख्नुहोस्। 🙂
अगस्ट 11, 2009 मा 4: 00 AM
मेरो चाचा दुरुपयोग व्यक्तिगत नहप्नुहोस् - मलाई थाहा छ त्यहाँ एक टन आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली मानिसहरू छन्। मँ चाचाको सार्वजनिक कोषको बढी आलोचना गर्दछु जब म जस्तै मान्छेहरू छन् प्रमाणित रेकर्डहरू र फन्ड गर्नको लागि उत्कृष्ट विचारहरू ... हुनसक्छ यो ईर्ष्याको कुरा हो। 🙂
म वेबिनार जाँच गर्छु! आमन्त्रित को लागी धेरै धन्यवाद। र - चाचा सँधै यहाँ मार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लगमा पाहुना पोष्ट गर्न स्वागत छ!
महान! र मलाई लाग्छ कि म तपाईंलाई पाहुना ब्लग पोष्टमा लिनेछु! हेर्नुहोस् यो तपाईंको बाटोमा आउँदैछ।